Ejegharị Na Europe na a mmefu ego Atụmatụ | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Ejegharị Na Europe na a mmefu ego Atụmatụ
Ejegharị Na Europe na a mmefu ego Atụmatụ
(Emelitere ikpeazụ On: 10/04/2021)
Ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego bụ ihe ịma aka! Otú ọ dị, ọ bụ omume dị ka ogologo dị ka ị na-eme gị nnyocha iji ndokwa gị na njem na-eji amamihe. Ọ pụrụ iju gị anya otú i nwere ike ịzọpụta site na nri mode nke njem ma ọ bụ ị na-ahọrọ dị ọnụ ala karịa ebe. atụkwasị anyị obi; e nwere ego-enyi na enyi ọzọ n'ihi na ihe niile tinyere gị na njem - si nkiri na njem na nri ka ụlọ.
Cheta, njem na a mmefu ego na-adịghị "ogbenye:"Na ha na-savvy! Ya mere, tupu ị na-aga imere onwe gị ebere, na-eche banyere ego nile ị ga-azọpụta mgbe ọ ka na-eme dị ịtụnanya na-echeta. Gị ego bụ mmachi na oké ọnụ ahịa; Ya mere, ị kwesịrị ị na-eme ya na-elekọta. Ebe a na-anyị n'elu Atụmatụ maka njem na Europe na a mmefu ego:
Ibé Your Nsoro
Mee gị njegasi n'ihu ihe ọ bụla ọzọ. Enweghị mgbagha ọ bụla, ị nwetara a ndepụta ga-gaa na European ebe. n'ezie, i nwere ike ịga leta ha niile mgbe ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego, karịsịa ma ọ bụrụ gị oge na-dị ka nanị dị ka gị ego. N'ihi ya, kama ịkwa ịhụ ha niile, bulie gị elu abụọ ma ọ bụ atọ. Ugbu a ịlele map ahụ ma ọ bụrụ na gị obodo na-na na atụle ndị mfe jikọọ, na ihe n'obodo ọzọ na-tinyere na-aga.
Ọmụmaatụ, i nwere ike inwe mmasị na-eleta Paris na Amsterdam. Lelee ụzọ, na ị ga-ahụ na Brussels bụ a obodo dị n'etiti abụọ! site na nkweta obodo na jikọọ, ma ọ bụ ndị dị n’etiti abụọ ebe njedebe, ị nwere ike nweta ihe mkpu maka gị Akon.
Ị na-kacha mma udu mgbe ị na-edebe gị hotel ma ọ bụ ụlọ mbikọ ụlọ tupu. The mbụ, mma. Họrọ ụlọ amamihe.
Mgbe oke ime na 5-kpakpando hotels pụtara zuru nkasi obi na okomoko, ha na-na na na-na smart nhọrọ mgbe emeso a uko ego. Ọzọkwa, anọ na ihe oké ọnụ ụlọ nkwari akụ ga-a n'efu nke gị ego gị, tumadi ma ọ bụrụ na gị na njegasi na-agụnye nlegharị anya ma na-aga obodo. Ọ pụtara na ị ga na-na iji ụlọ na-ugboelu na na-ejikarị ụbọchị gị esi na banyere.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta, i nwere ike ịnọ na a obodo maka free site na ịga na-ele ọbịa mgbanwe. Ndị ọzọ ọnụ ala ụlọ na-agụnye gọọmenti rụrụ na-enye obibi-style ụlọ ọrụ. Ụlọ na-ebiri na online n'ọma ahịa dị otú ahụ dị ka Airbnb nwekwara ezigbo maka njem na Europe na a mmefu ego.
Rie Dị ka a Obodo mgbe ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego
gastronomic utọ na n'ebe nile Europe. Ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na Europe na a mmefu ego, ihe kacha mma ị ga-eme bụ izere iri nri na ebe ndị njem nleta dị oke ọnụ. Ekwela ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ego agbaji gị nri mmefu ego.
Kama, eri dị ka a obodo ma na-a n'ezie na omenala ahụmahụ. Food ụlọ na n'okporo ámá nri ndị nile European obodo, ha, ha na ndị zuru okè hotspots ịzụta authentic nri. Na akụkụ kasị mma bụ na ha ga na-eri a ole na ole euro. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta na nri, see nri ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ị na-anọ na ụlọ nke nwere iji esi nri, ịzụta Efrata maka a efere i nwere ike mfe ime ka.
Ụra na Train
Ihi ụra na ụgbọ okporo ígwè n'agbata ebe bụ ikekwe otu nke anyị mmasị Atụmatụ maka ndị mmadụ na-eme njem na Europe na a mmefu ego. Kama imefusị bara uru ìhè awa n'ụzọ na-aga, ahọrọ na-aga na ihe-eji ụgbọ okporo. Ọ pụrụ iju gị anya otú ihe dị ọnụ ala karịa na ọ bụ karịa ntinye akwụkwọ a hotel maka n'abalị. Chọpụta, ị ga-atụ uche mma, ma ị ga-eteta ọma-zuru ike na a ọhụrụ obodo!
Ready to start traveling in Europe on a budget and akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè? Book gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge na-esi na nke kacha mma Mkpughe kwuru na oche!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#mmefu ego	#traveleurope	mmefu ego	cheaptravel	ego